Anobatsira matipi eiyo "jimunasitikisi" yepfungwa: Kufungisisa - Kufungisisa Kudzidziswa
Kuedza pane iyo dandemutande Pane zviwanikwa zvakasiyana (yemahara uye kwete) iyo inogona kushandiswa sechikamu che vapore neurocognitive uye kudzidziswa kwe mabasa makuru.
Imwe yeiyi zviridzwa ndiyo saiti KuzivaFun uripi zviitiko zvakawanda uye akapatsanurwa nenzvimbo yekupindira:
Iyo saiti inoda kunyoreswa kuburikidza neaccount, asi zviwanikwa zviri inowanikwa mahara. Kana iwe "uchitamba" pane ino saiti, iwe unozounganidza mapoinzi ayo anozotakurwa oiswa pamhepo chinzvimbo. Iyi inogona kuve nzira yakanaka yekuramba uchikurudzirwa, asi zvakare kuve neyakaenderera mhinduro pamusoro pekufambira mberi kwako.
Mutambo unogona kunakidza ndewe Spatial inoshanda ndangariro kugadzirisa iri muchikamu experimental kwaunofanirwa kurangarira nzvimbo uye nongedzo yemiseve yakapihwa mukati me gridhi. Pakupera kwechikamu chemutambo, chinzvimbo chemuseve wekupedzisira chakapihwa chinofanira kuve chakabatana nenhamba yakamisikidzwa paive nemuseve uri mubvunzo Mutambo wakazara zvakavakirwa pa nzvimbo yekuyeuchidza bvunzo Kubatanidza Kuchenjerera uye Kukwegura Kuchembera naSalthouse, Babcock, uye Shaw (1991) .
Kushanda kwemutambo "Spatial Working Memory Kugadziridza": tinya pamufananidzo kuti uone mashandiro awo
Le basa zvirongwa zvinokodzera zera rose, kune vese vana nevakuru, asi panogona kunge paine vamwe kukwana sezvo saiti iri muChirungu uye hapana dudziro dzemimwe mitauro dzakagadzirwa uyezve chinongedzo zvinogona kubuda isingakwezvi chaizvo yevana nevechiri kuyaruka sezvo iri yakanyanya nhema uye chena.
N-kumashure: iyo yemahara yewebhu-programu kudzidzisa ndangariro uye kutariswa
Apps, mabasa makuru
Anobatsira matipi e "jimunasitikisi" epfungwa: Kufungisisa2021-03-292021-03-29http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/03/children-593313_640.jpg200px200px
Anobatsira matipi eiyo "jimunasitikisi" yepfungwa 2nd chikamu: LumosityZvirongwa, Anobatsira maapplication nemitambo, Zvinyorwa, Kukarukureta, Executive mabasa, Executive mabasa, Mitambo, Ungwaru, Ungwaru uye kuziva mabasa, Mutauro, Mathematics, Masvomhu, Ndangariro, Kushanda ndangariro, Neuropsychology, Nyowani matekinoroji, Ongororo, Kuvandudza, Zvishandiso, Kurapa